မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သောနိုင်ငံများ -
Posted on January 3, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
မြန်မာပြည်နဲ့ ညီနောင်နိုင်ငံတွေလို့ ဆိုရမလားပဲ
ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ? (ပိတ်ရက်လို့ မဖြေသင့် :P) ဟုတ်ပါတယ်.. ဒီနေ့ဟာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၇၁နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ပါ ယောင်းတို့ရေ ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ လေးရက်နေ့မှာ လွပ်လပ်ရေးရခဲ့တယ် ဆိုတာ ယောင်းတို့အားလုံးလည်း သိပြီးသားပါနော်။
အက်ဒ်မင်က ယောင်းတို့ ဗဟုသုတ တိုးပွားရလေအောင် ပြောပြပေးချင်တာက မြန်မာပြည်နဲ့ မရှေးမနှောင်း လွပ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေအကြောင်းပါပဲ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေကတော့
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ဆယ့်ငါးရက်မှာ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယဟာ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ ကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ်ကနေ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တာပါ။
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံဟာလည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ်ကနေ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ကတော့ ၁၉၄၇ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်၊ မြောက် ကိုရီးယား
ကိုရီးယားနိုင်ငံကတော့ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ကတော့ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကမ္ဘာ့ပိတ်ရက် အများဆုံးနိုင်ငံများ
ဂျပန် နဲ့ ပြင်သစ် နိုင်ငံတွေရဲ့ ကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ်ကနေ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေးရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ် ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ကတော့ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ပါ။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုလိုနီနယ်မြေကနေ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၄)ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ နယ်သာလန် နိုင်ငံရဲ့ လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> အစားတစ်လိုင်းယောင်းတို့အတွက် နိုင်ငံတကာက ကမ္ဘာ​ကျော်​ည​ဈေးကြီးများ
အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မေလ ဆယ့်လေးရက်နေ့မှာ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံလက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နှစ်စဉ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုတော့ ဟီဘရူးပြက္ခဒိန်အရကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော်ဒန် နိုင်ငံဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ ကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ်ကနေ မေလ ၂၅ ရက်နေ့ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာပါ။
ဒီနိုင်ငံတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ အမိမြန်မာပြည်ကြီးလည်း ထာဝရငြိမ်းချမ်းသာယာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း …..
References – quora, en.wikipedia
မွနျမာပွညျနဲ့ ညီနောငျနိုငျငံတှလေို့ ဆိုရမလားပဲ
ဒီနဘေ့ာနလေဲ့? (ပိတျရကျလို့ မဖွသေငျ့ :P) ဟုတျပါတယျ.. ဒီနဟေ့ာ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံရဲ့ ၇၁နှဈမွောကျ လှတျလပျရေးနပေ့ါ ယောငျးတို့ရေ ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ ၁၉၄၈ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ လေးရကျနမှေ့ာ လှပျလပျရေးရခဲ့တယျ ဆိုတာ ယောငျးတို့အားလုံးလညျး သိပွီးသားပါနျော။
အကျဒျမငျက ယောငျးတို့ ဗဟုသုတ တိုးပှားရလအေောငျ ပွောပွပေးခငျြတာက မွနျမာပွညျနဲ့ မရှေးမနှောငျး လှပျလပျရေးရခဲ့တဲ့ နိုငျငံတှအေကွောငျးပါပဲ။ အဲဒီနိုငျငံတှကေတော့
အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ ၁၉၄၇ ခုနှဈ သွဂုတျလ ဆယျ့ငါးရကျမှာ လှတျလပျရေး ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယဟာ အင်ျဂလိပျတှရေဲ့ ကိုလိုနီနယျမွအေဖွဈကနေ လှတျလပျရေး ရခဲ့တာပါ။
ပါကစ်စတနျ နိုငျငံဟာလညျး အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ့ ကိုလိုနီနယျမွအေဖွဈကနေ လှတျလပျရေး ရခဲ့တာဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့ လှတျလပျရေးနကေ့တော့ ၁၉၄၇ သွဂုတျလ ၁၄ ရကျနေ့ ဖွဈပါတယျ။
တောငျ၊ မွောကျ ကိုရီးယား
ကိုရီးယားနိုငျငံကတော့ ၁၉၄၅ ခုနှဈမှာ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ကိုလိုနီနယျမွအေဖွဈကနေ လှတျလပျရေးရယူနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ လှတျလပျရေးနကေ့တော့ သွဂုတျလ ၁၅ ရကျနေ့ ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ကမ်ဘာ့ပိတျရကျ အမြားဆုံးနိုငျငံမြား
ဂပြနျ နဲ့ ပွငျသဈ နိုငျငံတှရေဲ့ ကိုလိုနီနယျမွအေဖွဈကနေ ဗီယကျနမျနိုငျငံဟာ ၁၉၄၅ ခုနှဈမှာ လှတျလပျရေးရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဗီယကျနမျ ရဲ့ လှတျလပျရေးနကေ့တော့ စကျတငျဘာလ ၂ ရကျနပေ့ါ။
သီရိလင်ျကာနိုငျငံဟာ အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ့ ကိုလိုနီနယျမွကေနေ ၁၉၄၈ ခုနှဈမှာ လှတျမွောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ လှတျလပျရေးနကေ့တော့ ဖဖေျောဝါရီလ (၄)ရကျနဖွေ့ဈပါတယျ။
အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံဟာ ၁၉၄၅ ခုနှဈ သွဂုတျလ ၁၇ ရကျနမှေ့ာ နယျသာလနျ နိုငျငံရဲ့ လကျအောကျကနေ လှတျလပျရေးရခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> အစားတဈလိုငျးယောငျးတို့အတှကျ နိုငျငံတကာက ကမ်ဘာကြျောညဈေးကွီးမြား
အစ်စရေးနိုငျငံဟာ ၁၉၄၈ ခုနှဈ မလေ ဆယျ့လေးရကျနမှေ့ာ ပါလကျစတိုငျးနိုငျငံလကျအောကျကနေ လှတျလပျရေးရခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ နှဈစဉျလှတျလပျရေးနကေို့တော့ ဟီဘရူးပွက်ခဒိနျအရကငျြးပတာဖွဈပါတယျ။
ဂြျောဒနျ နိုငျငံဟာ အင်ျဂလနျနိုငျငံရဲ့ ကိုလိုနီနယျမွအေဖွဈကနေ မလေ ၂၅ ရကျနေ့ ၁၉၄၆ ခုနှဈမှာ လှတျလပျရေးရခဲ့တာပါ။
ဒီနိုငျငံတှကေတော့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ မရှေးမနှောငျးမှာပဲ လှတျလပျရေးရခဲ့တဲ့ နိုငျငံတှဖွေဈပါတယျ။ အမိမွနျမာပွညျကွီးလညျး ထာဝရငွိမျးခမျြးသာယာပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး …..
Tagged countries, holidays, Independence Day, International
မည်းနေတဲ့ ချိုင်းကြား မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြူလာစေဖို့
Posted on November 10, 2016 April 20, 2017 Author
ချိုင်းကြားမည်းနေခြင်းဟာ ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ခံစားမိပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် လက်ပြတ်အင်္ကျီတွေဝတ်တဲ့အခါ လက်မြှောက်ရမှာ ကြောက်ဖူးလား။ အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို သေချာလိုက်လုပ်နိုင်ရင်တော့ ကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
ပုံတစ်ပုံချင်းစီမှာ လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်လေးတွေ ရေးပေးထားပါတယ်နော်။
Posted on March 14, 2019 March 14, 2019 Author Wynee Myanmar
အခှငျ့အလမျးမဖနျတီးရငျတော့ တိုးတကျမှုလမျးစတှေ ပြောကျဆုံးနဦေးမှာပါ